Kallattii guddina dinagdee itti fufsiisuuf kaa’ame
Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa muudama Ministira Muummee Doktar Abiyyi Ahmad Bitooteessa 24 bara 2010 erga raggaasisee booda dhimmoota siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaarratti haasaa taasisaniiru.
Haasaa Doktar Abiyyi taasisan keessaa gama dinagdeetiin kallattii hoggansa mootummaa isaanii hanga tokko kan ibsan yoo ta’u, nutis akka armaan gadiitti dhiyeessineerra.
Biyyi keenya waggoota kurnan lamaan darban keessa guddina saffisaa galmeessisuu isheerraa kan ka’e gama hiyyummaa hir’isuun, ijaarsa bu’uuraalee misoomaan, misooma humna namaafi kkfniin bu’aawwan dhufan ifatti kan mul’atan ta'uu kaasu.
Gama kanaan mootummaan qaala’ina gabaafi gatii sharafa alaa tasgabbeessuuf, rakkoolee damee faayinaansii furuuf, waliin gahiinsa tajaajila faayinaansii dinagdeef dhiyaachaa jiru bal’isuuf, argannoo sharafa alaa, qusannoofi invastimantii jajjabeessuuf, carraa hojii uumuuf, waggaatti galii tokkoon tokkoon lammiilee guddisuuf, akkasumas hiyyummaa hir’isuuf tarkaanfileen addaddaa, fakkeenyaaf, imaammata hordofamaa jiru fooyyeessuun danda’ameera jedhu.
Gama biraan ammoo waggoota darban keessa guddinni dinagdee biyyattii dameewwan hunda keessatti hudhaa ta’ee kan mul’ate yoo ta’u, isaan keessaa gurguddoon sirni daldalaa haala barbaadameen guddachuu dhabuu, dhiyeessiifi fedhiin sharafa alaa walmadaaluu dhabuu, jireenyi qaala’uu, liqiin biyya alaa walirra tuulamuu, qusannoo biyya keessaafi invastimantii gidduutti garaagarummaan bal’aachaa deemuufaa akka fakkeenyaatti ka’aniiru.
Rakkoolee kanneen furuuf hojiileen damee qonnaa keessatti hojjetamaa jiran jajjabeessaa ta’aniyyuu haalaan teknoloojiitiin waan hindeggaramneef, akka biyyaatti bu’aawwan dinagdeerraa dhamdhamachuu mallu hinarganne kan jedhan Dr. Abiyyi, haalota darbanirratti yaada keenya hidhuu dhiisnee xiiqiitiin hojjechuun murteessaa ta’uu yaadachiisu.
Rakkoolee misooma dinagdee biyyattirratti mul’achaa jiran furuuf ammoo raawwii KGT 2fa hanga ammaatti jiru gamaggamuun barbaachisaa ta’uu dubbatanii, kanaanis imaammataafi tarsiimoo damee kanaa fooyyeessuun guddina dinagdee ariifataa itti fufsiisuuf tattaaffiin walirraa hincitne kan taasifamuudha. Yeroo KGT 2fa hafe jechuun waggoota lamaafi walakkaa keessattis karoora sagantaalee misooma dinagdee haala saffisa qabuun milkeessuuf tattaaffiin olaanaan kan godhamu ta’uus ibsameera.
Kana fiixaan baasuuf ammoo lammiileen Itoophiyaa marti kan biyya keessa jiraniifi biyyoota alaa jiraachaa jiran akka qaama tokkootti waliin hojjechuu qabu jedhanii, keessumaa namootni biyya alaa jiraachaa jiran beekumsaafi muuxannoo isaanii qabachuun misooma dinagdee biyyasaaniirratti hirmaachuu akka danda’an waamichi dhiyaateera. Mootummaanis hirmaannaasaanii guddisuuf duubatti kan hinjenne ta’uun ibsameera.
Akka ibsa Doktar Abiyyiitti, sochiilee misoomaa biyyattii keessatti dhaabbileen misoomaa hanga har’aatti deggarsa taasisaa kan turaniifi ammas gochaa jiran yoo ta’u, quuqama misooma Itoophiyaaf gaheensaanii olaanaa ture. Kanaan boodas deggarsa kamiinuu ummataafi mootummaa biyyattii cina kan hiriiran ta’uu abdii qaban eeraniiru.
Gama Hidha Guddicha Haaromsaa ilaalchisees dinagdee biyyattii fooyyessuu keessatti qooda guddaa kan bahatu waan ta’eef, ejjennoofi kutannoo uumameen badhaadhina biyyattii dhugoomsuuf halkaniifi guyyaa hojjechuun murteessaa ta’uus ibsameera.
Walumaagalatti, gama dinagdeetiin haasaa Doktar Abiyyi taasisan baay’ee dimshaasha ta’eyyuu lammiileen biyyattii marti loogii malee misooma dinagdeetiin fayyadamummaa isaanii haala walqixaan mirkaneeffachuutiin akka badhaadhan hawwaniiru. Kana dhugoomsuuf ammoo qonnaan bultootni, barsiisotni, hojjettootni mootummaafi miti mootummaa, qaamoleen mootummaa sadarkaa sadarkaan jiraniifi kkf damee irratti bobba’anirratti yeroo kamuu caalaa cimanii hojjechuun kallattii kaa’amedha.
Torban kana/This_Week 4300
Guyyaa mara/All_Days 1641895